चिसोसँगै कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि फेरि लकडाउन हुने ! - jagritikhabar.com
चिसोसँगै कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि फेरि लकडाउन हुने !
कोरोनासंक्रमणको तीनवटा लहर पार गरिसकेको बेलायतमा अहिले पनि संक्रमण दर उच्च छ । पछिल्लो एक महिनायता दैनिक संक्रमित संख्या लगातार ३० हजार भन्दा बढी छ भने केहि दिनयता दैनिक ४० हजार भन्दा बढी संक्रमित भइरहेका छन् ।
‘डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ एण्ड सोशल केयर’ को तथ्यांक अनुसार आइतबार ४० हजार भन्दा बढी संक्रमित भएका थिए । सोमबार ४४ हजार भन्दा बढी रहेकोमा मंगलबार थप ४२ हजार ४८४ नयाँ संक्रमित थपिएका छन् ।
यससँगै बेलायतमा कुल संक्रमितको संख्या झन्डै एक करोड पुग्न लागेको छ । मंगलबारसम्मको तथ्यांक अनुसार यहाँ ९९ लाख ३२ हजार ४०८ जना संक्रमित भइसकेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस १४औं महाधिवेशनको संघारमा छ । वडा, पालिका, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र हुँदै जिल्ला संरचनाको अधिवेशनको तयारीमा छ । गण्डकीका ३ जिल्लामा यसअघि नै जिल्ला निर्वाचन सकिएको छ । मनाङ, मुस्ताङ र गोरखामा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भयो । बाँकी ८ जिल्लामा अहिले क्षेत्रीय कार्यसमिति र महाधिवेशन प्रतिनिधिको निर्वाचन करिब सकिने चरणमा छ ।